09.05.2020 Category: Entrevues
Blog de Carol Tice waxay sur deux jours, Samee Qorida Nolosha, en 2008.
Waxay qaadatay dhawr sano si ay u hesho boogeeda dhulka, laakiin by 2011, waxay horay u soo jiidaneysa dakhliga lix-muuqaalka … Iyadoo liiska email SMNUMX macaamiisha!
Maanta, waxay ka dhigtaa 500 000 $ cire sanadkiiba ka yar macaamiisha 20 000.
"Sug, sidee xitaa suurtagal ah?" Waxaad u malayn kartaa. "Miyaadan u baahnayn in aad haysatid boqolaal kun oo macaamiisha email ah oo aad malaayiin ah kala sheekaysataan si aad u sameysid lacag noocaas ah?"
3 Sameynta 500 000 $ + Sanadkiiba
Carol Tice ayaa bilowday iyada labaad oo ah qora xor ah oo dib loogu soo celiyo 2005, isagoo sidoo kale xor u ah sanadaha 5 ama dib ugu soo noqoshada ’90s. Dadka badankood oo hoos u dhaadhaya wadadaas waxay ku dhamaanayaan shaqeyn iyo lacag la’aan. Si kastaba ha ahaatee, Carol wuxuu ahaa mid halis ah mana uusan dhicin wax micno ah (waxay leedahay biilasha in ay bixiso, ka dib dhan!).
Waxaan ahaan lahaa qoraa xor ah oo si fiican u shaqeynayay. Waxaan U Maleynayay à Aan Caawin Karo Qorayaasha Kale – Maya, Taasi Waa Qalad. Waxaan dareemay qasab inaan ka hadlo wax aan arko shaydaan qaldan oo aan ka caawiyo qorayaasha inay helaan mushaar wanaagsan, "ayuu yiri Carol Qor qoraalka maqaal
Masuuliyaddeeda qoyskeeda iyo xirfadaheeda xorta ah waxay horey u sii wadeen mashquul badan, lakiin waa la joojiyay oo kaliya en ay sameyso. "Aad ayaan ugu faraxsanaa inaanan seexan karin habeenkii oo ka fakaraya dhammaan fariimaha aan doonayo dans aan qoro," ayay tiri isla goobtaas.
Sidaa darteed, 2008, Samee Qoritaan Lifaaqa ah. Yaa horay u saadaaliyay à barta blogka ah ee horeba tartanka u tartami lahaa uu noqon doono 500 000 $ + ganacsiga sanadka? Dhab ahaan ma aha Carol.
Dabbling maaha inaad ku hesho meel kasta. "Waxaa muhiim ah à la fahmo dans aad dhiseyso ganacsi, iyo, sida ganacsi kasta oo kale, helitaanka bartaada dhulka ah wuxuu u baahan doonaa waqti badan iyo tamar,". waxay u fasiraysaa Carol iyada Qorayaasha Waajibaadka wareysi. "Sidaa darteed waxaan dhihi lahaa haddii aad arrin halis ah ku tahay, waa inaad u aragtaa shaqo wakhti-wakhti ah, maalgashadana ugu yaraan 15 (vendredi 20-25) toddobaadkii boggaaga."
Kuma filna dans si fiican loo qoro. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qoro shabakada iyo sida loo soo bandhigo qoristaada. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fahamto sida loo wado ololeyaal suuq-gareeyo iyo sida loo abuuro oo loo bilaabo alaabtaada. Ma dooneysaa inaad ku hesho liiska A-da? Ka dibna naftaada u gudub si aad wax uga baratid qoraalka iyo daabacaadda internetka.
Carol wuxuu qoraa mawduuca qoraalka ah ee blogga, wuxuu si xoog leh uga soo shaqeeyey xarumaheeda, wuxuuna si deg deg ah ah u soo jiitay xiisaha ka dambeeya tifaftiraha tifaftiraha ee Jonathan Mackirsernanhaoha Dhakha Kuwaas iyo hoggaamiyeyaal kale ayaa ku tababaray barashada hababka ugu fiican, waxay soo bandhigeen hareeraheeda waxayna ka caawisay inay martigeeda martida marto sare. Waxay badbaadiyeen sanadahii tijaabo iyo qalad.
Bishii Maajo 2010, Carol waxay ka heshay tweeco ka timide tifaftiraha jaamicadda Copyblogger Jon Morrow, taasina waxay ahayd barta ay ku leedahay blog-ka.
Kadib wada hadal telefoon, Jon wuxuu Carol fursad u siiyey inuu qoro booska martida ee Copyblogger. Waxay isla markiiba aqoonsatay fursadda cajiibka ah waxayna aqbashay dalabka.
Ku qorida boostada martida ee bogga A-liiska sida Copyblogger ayaa u muuqday mid caqabad ku ah. Carol dadaalkiisii ​​aore ayaa seegay calaamadda, sidaa darteed ayay ku khasabtay inay iska tuurto oo bilowdo. Si kastaba ha noqotee, waxay rabtay inay ku dhejiso xaddiga dadaalka loo baahan yahay si ay u abuurto boosteejo marti-gelin ah, sidaa darteed waxay la shaqeysay Jon ilaa uu ka qanacsanaa natiijada.
50 Xeelado aan kufilan karin oo lagu helo raadinta mawduucyada mawduucyada waawayn aad u weynaa, ayaa lagu daray Best of Copyblogger 2010, oo gaadhay tareenka gaadiidka ee bogga Carol.
Waxay ku biirtay wixii markaas ahaa A-Qor Blogging koorsada (hadda A-List Blogging Masterclass) taas oo siisay fursad ay ku heli karto ilo waxbarasho iyo sidoo kale kulan ay ku weydiin karto su’aalaha. Carol waxay noqotay xubin firfircoon oo ka mid ah bulshadaas, waxayna waydiineysaa su’aalaha 400 ee ku jira sheekada iyada oo la wadaageysa ra’yigeeda dadka kale.
Kadib, maalin maalmaha ka mid ah, Maryan oo ka socota A-List Blogging ayaa email u dirtay iyada oo soo jeedisay inay gasho Qor si ay u qorto Blogs Top 10 Blogs si ay ula tartamaan Qorayaasha. Carol wax badan kama fileynin, laakiin waxay tilmaamtay inaysan ku xanuunaynin isku dayga. Oo bal qiyaas maxaa? Way ku guuleysatay.
In aad ka gudubto rabitaankaaga inaad iibiso
Papa badan ayaa ka baqaya en ay iibiyaan maxaa yeelay waxay isku duubaan iibsashada iyagoo loola jeedo (yaa ku eedayn kara, dhab ahaantii?). Waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto arrintan haddii aad rabto inaad sameyso lacag fiican oo laga helo bartaada. Maxaa ka caawiyey Carol dans uu sameeyo taas oo ahayd A-Qor Blogging. Dhibaato isku mid ah ma leedahay? Markaas waxaad u baahan tahay inaad hesho wax ama qof kaa caawin kara inaad maskaxdaada toos u hesho. Waxay noqon kartaa mid bilaash ah, waxay noqon kartaa wax qiimo leh, waxay noqon kartaa talooyin laga helo ganacsade ganacsi … Cire kastoo adiga kuu shaqeynaya!
Waxaad u malayn kartaa inaad ogtahay waxa akhristeyaashu rabaan, laakiin fursadahaagu maaha.
Jooji sameynta fikradaha – billow inaad su’aalo waydiiso oo fiiro gaar ah u yeelatid jawaab celinta aad helayso. Ka dib, iibinta alaabtaada waxay noqon doontaa mid sahlan, sababtoo ah waxaad siin doontaa dadka wax ay doonayaan.
Sameynta 500 000 $ + Sanadkiiba
Marka sidee ayay uga gudubtay in 6 ay ku socoto 2011 si ay u jabiso 500 000 $ ee 2016?
Sannado badan, ebooks waxay soo saartay, webinaires, iyo koorsooyin qoris ah, laakiin waxa ugu muhiimsan waxay ahayd en ay xubin ka noqoto xubinimadeeda bulsho farxad leh. Xilligan la joogo, xubinnimada Den ayaa ku kacaya 25 $ / bishii, waxayna leedahay wax ka badan 1, 100 xubnaha. Samee xisaabta.
Maxay tahay talada Carol ee dadka kale ee blogueurs doonaya en ay si guul leh uga faa’iideystaan ​​blogs-ka?
Dans iyada Qorayaasha wareysi kharash ah, waxay kugula talineysaa bilaabida alaabada ay fududahay à la abuuro, ku qiimee 0,99 $ – 2,99 $, oo garoon u samee dhageystayaashaada. Kadib, samee wax soo saar labaad oo ah waxoogaa qiimo badan oo xoogaa qaali ah. Kadib, samee mid saddexaad, taasi xitaa waa ka sii qiimo badan tahay oo xitaa ka qaalisan, iyo wixii la mid ah.
Dhismo jilbahaaga bilowga, adoo ka bilaabaya qiimaha sicir-gelinta, dhammaan habka aad u qaadatid alaabtaada premium. Sidaa daraadeed waxaad yeelan doontaa farabadan oo ah alaab qiimo badan oo qiimo badan oo rafcaan u leh dadka kala duwan.
Sida laga soo xigtay Carol, tani waxay u shaqeyn doontaa si ka fiican si blogueur ah oo leh liis yar oo email ah inta laga soo saaro alaab qiimo leh oo ka baxsan baaskiilka.
Ugu dambeyntiina, dhammaantood way wada foorarsadaan si ay u dhegeystaan ​​dhegeystayaashaada oo ay siiyaan waxa ay doonayaan. Marka Carol la waydiiyo "Maxaad u malaynaysaa inay tahay farqiga ugu wayn ee u dhexeeya blogueur kuwaas oo ku filan inuu daboolo biilasha iyo blogueurs sida adiga oo sameeya lix sawir?" Waa sida a déclaré:
"Cilaaqaadyada xiriirka leh akhristeyaasheena. Dhammaantood waxay dib ugu laabtaan si ay xiriir ula yeeshaan akhristayaashaada, dhageysiga, iyo u siiyaan waxa ay doonayaan. "
Mushaharka qorayaasha ee Mareykanka (juillet 2017). Qoraayaasha Mareykanka ayaa sameeya, celcelis ahaan, 42 042 $ marka loo eego Sahanka mushahar bixinta.
Blog za vosak Carol Tice bilawday, Samee Qorida Nolosha, 2008. godine. Waxay qaadatay dhawr
Carol Tice waxay blog bilawday, Samee Qorida Nolosha, Pada 2008. Waxay qaadatay dhawr sano
Carol Tice waxay bilawday blog, Samee Qorida Nolosha, 2008-ban. Waxay qaadatay dhawr sano és
Löydä MySQL-tietokanta phpMyAdmin-sovelluksesta
Entretien de l’hôte Web avec le gestionnaire HostMetro, Kyle Dolan
70 + Jaangooyooyinka Shabakada Hufnaanta leh e-mail Loogu Talagalay kuwa horumarinta Smart / Digger
12 Cara Untuk Memahami Audiens Anda (Dan Memberikan Konten Stellar)
Wawancara Pakar: Louisa Claire dari Brand Memenuhi Blog Berbagi Kiat untuk Blogger Lalu Lintas Rendah
Hvernig á að búa til falleg töflur og myndrit fyrir vefsíður þínar?